Amathikithi Eshibhile we-Euroostar kanye namanani entengo wokuhamba | Londoloza Isitimela
Amathikithi Eshibhile we-Euroostar kanye namanani entengo wokuhamba
Ikhaya > Amathikithi Eshibhile we-Euroostar kanye namanani entengo wokuhamba
Lapha ungathola lonke ulwazi mayelana Amathikithi wesitimela ashibhile e-Euro futhi Izintengo zokuhamba ze-Eurostar kanye nezinzuzo.
Izihloko: 1. I-Eurostar ngama-avelele wesitimela
2. Mayelana ne-Eurostar 3. Imininingwane ephezulu yokuthola ithikithi leshibhile le-Euroostar
4. Amanani amathikithi e-Eurostar abiza malini 5. Kungani kungcono ukuthatha isitimela se-Eurostar, futhi ungahambi ngendiza
6. Uyini umehluko phakathi kweZinga, UNdunankulu ojwayelekile kanye noNdunankulu webhizinisi kwi-Eurostar 7. Ingabe kukhona okubhalisile kwe-Eurostar
8. Kusasele isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba lufike 9. Yini amashejuli wesitimela we-Eurostar
10. Yiziphi iziteshi ezisetshenziswa yi-Eurostar 11. I-Eurostar FAQ
I-Eurostar ngama-avelele wesitimela
Inkampani ye-Eurostar yethulwa ngomhlaka 14 Novemba 1994
Enye yezitimela ezisheshayo eYurophu yi-Eurostar, Ijubane i-Eurostar elifinyelela kulo yi-320km ngehora
Umhubhe wesiteshi i-Eurostar 50.45 km ubude noma 31.5 amamayela. Lokho kulingana 169 I-Eiffel Towers ibigcwele phezulu komunye nomunye
2h15 yesikhathi sokuhamba phakathi kweParis neLondon ebhodini le-Eurostar
Lapho uhamba ne-Eurostar usuka e-UK uye e-Europe, uthole 1 ihora emuva ngesikhathi
Ukweqa komhubhe wesiteshi kuthatha 35 amaminithi
Izitimela ezihamba ngesivinini esikhulu i-Eurostar iyisevisi exhuma i-Western Europe ukuya eLondon naseKent e-United Kingdom, Ukuxhumana okuvela eYurophu yiParis neLille eFrance, EBrussels, kanye ne-Antwerp eBelgium, IRotterdam ne-Amsterdam eNetherlands. Futhi, ungathola ngesitimela usuka eLondon uye eDisneyland Paris (Isiteshi sesitimela saseMarne La Vallee Chessy) futhi izindawo eziba khona ngezikhathi ezithile eFrance EzinjengeMarseilles neMoutiers kwiiFrench Alps. Zonke izitimela ze-Eurostar zinqamula ku-English Channel ngeChannel Tun tun.
I Insiza yesitimela ye-Eurostar izitimela zihamba kuze kufike 320 km ngehora emigqeni yesitimela esinejubane eliphezulu. Kusukela i-Eurostar yaqala ukusebenza ngaphakathi 1994, kwakhiwa imigqa emisha eBelgium nase-UK ukwehlisa izikhathi zokuhamba phakathi kwezindawo ezihamba nge-Eurostar. Iphrojekthi yesiteji esineziteji ezimbili zeThanjini Rail Link yaqedwa ngomhlaka 14 Novemba 2007, lapho itheminali laseLondon le-Eurostar lidluliswa lisuka kuWaterloo International layiswa ILondon St Pancras International esiteshini sesitimela.
Iya ku Gcina Ikhasi eliyisiqalo noma usebenzise lewijethi ukusesha uqeqesha amathikithi e-Eurostar
– Gcina i-App Yesitimela ye-iPhone
– Gcina i-App Yesitimela ye-Android
Usuku Lokubuya (Ongakukhetha)
Abantu abadala (26-59):
Imininingwane ephezulu yokuthola ithikithi leshibhile le-Euroostar
inombolo 1: Hlela amathikithi akho e-Eurostar kusengaphambili ngangokunokwenzeka
Amathikithi wesitimela e-Eurostar ayatholakala phakathi 3 izinyanga ukuze 6 izinyanga ngaphambi kokusuka kwesitimela. Amathikithi wesitimela sokubhuka kusengaphambili qiniseka ukuthi uthola amathikithi ashibhile kunawo wonke futhi amathikithi wesitimela ashibhile we-Eurostar akhawulelwe kakhulu. Amanani amathikithi wesitimela we-Eurostar akhuphuka ngentengo njengoba usondela ngosuku lokuhamba, ukuze wonge imali ekuthengeni kwakho ithikithi lesitimela, uku-oda ngangokunokwenzeka kusengaphambili.
inombolo 2: Ukuhamba nge-Eurostar ezikhathini ezingekho ngaphezulu kwephakeme
I-Eurostar, Amanani amathikithi ashibhile ngesikhathi samahora okude, ekuqaleni kwesonto, futhi emini. Maphakathi nesonto uhamba ngezitimela (NgoLwesibili, ULwesithathu noLwesine) kuvame ukunikela ngamanani ashibhile. Ngamanani amahle kakhulu, ungathathi i-Eurostar ekuseni nakusihlwa phakathi nesonto (ngenxa yabahambi abaningi bebhizinisi), futhi ugweme ukuthatha abagibeli be-Eurostar ngoLwesihlanu kusihlwa nangeSonto (evumelana nokuthola izimpelasonto), ngesikhathi amaholide omphakathi futhi nangesikhathi samaholide esikole amanani e-Eurostar skyrocket.
inombolo 3: Oda amathikithi akho e-Eurostar lapho uqiniseka ngohlelo lwakho lokuhamba
Insiza yezitimela zase-Eurostar iyadingeka kakhulu futhi okwamanje, yinkampani yesitimela ye-Eurostar kuphela eqhuba izitimela emhubheni we-English Channel, Ngakho-ke, akukho mncintiswano. I-Eurostar ukuphela kokusebenza kwesitimela emizileni ephakathi kweNgilandi neNtshonalanga Yurophu ibeke imikhawulo ethile yamathikithi esitimela. Uhlobo lwamathikithi wesitimela kuphela ongashintshwa, amanye amathikithi wesitimela awakwazi ukushintshwa noma ukubuyiselwa imali, kepha kunezithangami ku-inthanethi ongathengisa ngazo amathikithi akho ezitimela ngesandla sesibili. Ngakho, Gcina isincomo sesitimela se Ukuhamba kwe-Eurostar iwukubhuka uma uqiniseka ngohlelo lwakho lokuhamba.
inombolo 4: Thenga amathikithi akho e-Eurostar ku-Gcina A Isitimela
Gcina isitimela kuneminikelo enkulu kakhulu yamathikithi wesitimela eYurophu nasemhlabeni jikelele, futhi ngenxa yamandla ethu, sithola amathikithi ashibhile kakhulu we-Eurostar. Sixhunywe ku-opharetha bezitimela abaningi kanye nemithombo kanye nama-algorithms ethu ezobuchwepheshe akunikeza amathikithi ashibhile kakhulu we-Eurostar futhi kwesinye isikhathi ngokuhlanganiswa kwabanye abaqhubi bezitimela kwezinye izindawo. Futhi singathola ezinye izindlela zokusebenzisa i-Eurostar.
Amsterdam To London amathikithi ezitimela
Amathikithi eParis aya eLondon
I-Berlin iya eLondon amathikithi wesitimela
Amabhulashi aya amathikithi wesitimela aseLondon
Amanani amathikithi e-Eurostar abiza malini?
Amanani amathikithi angaqala ku- € 35 ngesikhathi sokuphromotha kodwa angafika ku- € 310 ngomzuzu wokugcina. Amanani e-Eurostar kuya ngesigaba osikhethayo. Nalu uhlu lokufingqiwe lwamanani aphakathi neklasi ngalinye leLondon-Paris / ILondon-Brussels / London-Amsterdam uhambo:
Ithikithi lendlela eyodwa Uhambo olujikelezayo
Okujwayelekile 35 € – 190 € 68 € – 380 €
UNdunankulu Ojwayelekile 96 € – 290 € 190 € – 490 €
Ibhizinisi Premier 310 € 600 €
ILondon iye eBrussels ngesitimela
London eParis ngesitimela
ILille iye eLondon ngesitimela
ILondon ukuya e-Amsterdam ngesitimela
Kungani kungcono ukuthatha isitimela se-Eurostar, futhi ungahambi ngeNdiza?
1) Inzuzo yokuhamba kwe-Eurostar ukuthi uya futhi ufike ngqo enkabeni yedolobha kunoma yimaphi amadolobha osuka kuwo, le yinto ehlukile kakhulu kuzitimela, ngakho-ke uma uqeqesha ukuhamba usuka eParis, EBrussels, Amsterdam, Rotterdam, I-Antwerp, ILille noma iLondon lokhu kuyinzuzo enkulu ye-Eurostar. Uma kuziwa Amanani e-Eurostar, kuvame ukwahluka. Okunye ukukhushulwa kukuvumela ukuthi uthole amathikithi ashibhile we-Eurostar. Kepha ngezinsuku zokugcina ngaphambi kokusuka, amanani ayakhuphuka. Uma uthanda ukuhamba okuhle, I-Eurostar ingeyakho!
2) Ukuhamba ngendiza kunenqubo yokuphepha esikhumulweni sezindiza, futhi lokho kusho ukuthi kufanele okungenani ube 2 amahora ngaphambi kokusuka kwakho okuhleliwe, nge-Eurostar udinga ukuba nje 1 ihora kusengaphambili. Futhi, kufanele uye esikhumulweni sezindiza usuka enkabeni yedolobha. Ngakho-ke uma ubala sonke isikhathi sokuhamba, I-Eurostar ihlala iwina ngesikhathi sokuhamba esiphelele.
3) Kwesinye isikhathi izintengo zezitimela ziphakeme kunendiza endiza ebhekene nayo ngethikithi lobuso, kepha ukuqhathanisa kufanele kufake, kubiza malini ukuthatha izindlela zokuhambisa esikhumulweni sezindiza, Ngaphandle kwezinye izimo uthola nesikhathi sokuphumula lapho ehamba nge-Eurostar, futhi okokugcina nge-Eurostar awunayo imali yemithwalo.
4) Izindiza ngesinye sezizathu zokungcoliswa okuphezulu komhlaba wethu, ezingeni lokuqhathanisa, izitimela imvelo enobungane kakhudlwana, futhi uma uqhathanisa indiza ukuqeqesha ukuhamba, ukuhamba kwesitimela kungukungcola komoya ongcolisayo okungu-20x ukwedlula izindiza.
Amathikithi eLuxembourg Kuya eLondon
Amathikithi e-Antwerp eLondon
Rotterdam amathikithi aseLondon
ILyon ukuya amathikithi eLondon
Uyini umehluko phakathi kweZinga, UNdunankulu Ojwayelekile, kanye noNdunankulu webhizinisi kwi-Eurostar?
Izitimela ze-Eurostar zinezinsizakalo ezimbalwa zekilasi ezakhelwe noma iziphi izabelomali, nanoma yiluphi uhlobo lokuhamba, noma ngabe ungumhambi webhizinisi noma ukuzijabulisa noma kokubili 🙂
Amathikithi Ajwayelekile E-Eurostar:
I Ithikithi elijwayelekile le-Eurostar ishibhile kunazo zonke imali yokuthenga etholakalayo. Kuhle ukubhuka leli thikithi lesitimela ngaphambi kwesikhathi, ngenxa yamathikithi ajwayelekile amanani aphansi – bathengisa ngokushesha. Abahambi abaphethe ithikithi elijwayelekile bangathatha 2 amasudi + 1 thwala izimpahla mahhala. Abagibeli kuma-Standard Eurostar Amathikithi angabuye ajabulele i-WiFi yamahhala nokukhethwa kwesihlalo. Amathikithi ajwayelekile awabuyiswa.
Amathikithi weNdunankulu Ejwayelekile:
Lesi sigaba samathikithi sibiza kakhulu kunohlobo lwamathikithi e-Standard Eurostar, le Ithikithi lePremier Standard inikeza izinsizakalo ezingeziwe. Ngaphezu kwezinzuzo zamathikithi ajwayelekile esiwabhale ngenhla, Amathikithi wePremier Standard anikeza izihlalo ezinhle kakhulu ngegumbi lezinyawo, kukhethwa mahhala nomagazini noma amaphephandaba, futhi uthola ukudla okulula kanye neziphuzo kusihlalo sakho esikebheni se-Eurostar. Amathikithi wePremier Standard ayashintshwa ngemali ekhokhwa ngokuya lapho uya khona.
Amathikithi Ebhizinisi likaNdunankulu wase-Europe:
I Ithikithi Lebhizinisi Elikhulu le-Eurostar abathengi bangajabulela zonke izinzuzo esizibhale ngaphezulu kodwa futhi, abagibeli be-Eurostar Business Premier bazohlomula kuwona 3 izikhwama zemithwalo esikhundleni 2, imenyu yokudla okunethezeka eklanyelwe ngumpheki owaziwayo uRaymond Blanc, Abagibeli beNdunankulu yeBhizinisi bangajabulela indawo yokuphumula ngaphambi kokugibela isitimela lapho beya eLondon noma besuka eLondon, ngaphezu kwalokho ukungena okukhethekile ngaphakathi 10 imizuzu kanye nensiza yokubhuka itekisi kubo. Okubaluleke kakhulu, lolu hlobo lwamathikithi wesitimela we-Eurostar Business Premier Isitimela avumela ukuhamba okuguqukayo: ungaguqula futhi ukhansele uhambo lwakho, ngaphambi kokusuka kwakho noma kuze kube 60 izinsuku ngemuva kokuhamba kwakho, konke ngaphandle kwemali eyengeziwe.
Ingabe kukhona okubhalisile kwe-Eurostar?
Ayikho, futhi kunalokho, I-Eurostar isekelwa kuphela ngephuzu lokubonisa amathikithi futhi ayisekelwa noma yikuphi ukudlula kokuhamba, kodwa uma uhamba kakhulu nge-Eurostar ungajoyina i-Eurostar Club, lolu uhlelo lokuthembeka olunikezela ukuthi uqoqe amaphuzu okuhamba ngesitimela ukuze ukwazi ukuhlenga la maphuzu kumathikithi noma izaphulelo. Uhola 1 khomba ngawo wonke ama- £ 1 owasebenzisile futhi la maphuzu akunikeza amalungelo athile:
– Kusukela 200 amaphuzu: Uthola amathikithi we-Eurostar ngamanani ancishisiwe.
– Uma uthola 500 amaphuzu: ungathola 1 ukuthuthukiswa kwensiza.
– Futhi uma ukwazile ukufinyelela 1,000 amaphuzu: ungakhulula 1,000 ukhomba ohambweni lokuya nokubuya I-Eurostar eya eLondon kusuka kuphi eNtshonalanga Yurophu.
Kusasele isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba lufike?
Ukuze uthole i-Eurostar yakho futhi ube ngesikhathi esifanele, ujantshi utusa ukuthi ufike okungenani 1 ihora ngaphambi kokuba isitimela sakho se-Eurostar sisuke. Sise-Gcina A Isitimela selokhu sahamba kakhulu ezitimeleni zase-Eurostar ukuthi lesi isikhathi esanele futhi uma umugqa wokulawula ipasipoti ungeke ube mude, ungakwazi futhi ukujabulela izitolo futhi uthole lezo zinto ozidingayo uhambo lwesitimela ukuze lubushelelezi ngangokunokwenzeka.
ELondon kuya ezitimeleni iMarseilles
ILondon ukuya eMoutiers Izitimela
ILondon ukuya eBourg Saint Maurice Izitimela
Yini amashejuli wesitimela we-Eurostar?
Lo ngumbuzo onzima futhi owodwa ongawuphendula ngo-A A A Train in real-time, iya ekhasini lethu lasekhaya bese uthayipha imvelaphi yakho nendawo oya kuyo, futhi ungathola okunembe kakhulu Amashejuli wesitimela we-Eurostar bangu, Kukhona izitimela ezivela 7 ekuseni kuya 9 kusihlwa kunoma iyiphi yemizila ye-Eurostar nasezindleleni ezithathwa kakhulu njengeParis kuya eLondon noma eLondon kuya eParis, unezitimela zase-Eurostar ezisebenza njalo ngehora nengxenye yehora, kufanele ukhethe ithikithi elifanele le-Eurostar elilungele uhlelo lwakho lokuhamba.
ILondon iya e-Antwerp ithikithi lesitimela
ILondon ukuya eRotterdam ithikithi lesitimela
IDisneyland Marne-la-Vallee ithikithi lesitimela laseLondon
ILondon ukuya eLille ithikithi lesitimela
Yiziphi iziteshi ezisetshenziswa yi-Eurostar?
Isiteshi sesitimela saseParis se-Eurostar siqanjwe Paris Gare du Nord, isiteshi sesitimela sitholakala esifundeni se-10 saseParis, okuyi +-30 ukuhamba ngamaminithi ukusuka eKhathedrali likaNotre Dame. Ukuthatha i-Eurostar, kufanele ungene esiteshini futhi ukhuphuke 1 phansi ngaphakathi kweGare du Nord kusetshenziswa izifudumezi ezikhona maphakathi nesiteshi.
E-Disneyland Paris, I-Eurostar ifika esiteshini UMarne La Vallee Chessy, okukhona 5 ukuhamba imizuzu ukusuka eDisneyland Resort naseDisneyland Hotels. Kukhona indawo yokugcina imithwalo kwesobunxele ngaphakathi kwesiteshi futhi ungahamba ujabulele ipaki ngaphandle kokukhathazeka ngempahla yakho eyigugu.
ELondon, Namuhla izitimela ze-Eurostar ziyahamba futhi zifike St Pancras Isiteshi Somhlaba, itholakala enyakatho nesikhungo sedolobha laseLondon. Ngaphambi 2007, Izitimela ze-Eurostar zazivame ukufika eWaterloo Station eLondon.
I I-Brussels Midi-Zuid (EBrussels South) Isiteshi sitholakala maphakathi neBrussels, kepha qiniseka ukuthi uyaqonda ukuthi uyakudinga I-Brussels Midi-Zuid futhi hhayi iBrussels Central Station, Isiteshi sesitimela saseBrussels Midi-Zuid sine 22 uqeqesha amapulatifomu, nehhovisi lamathikithi e-Eurostar liseduze nepulatifomu 8. Ithikithi lesitimela le-Eurostar likuvumela ukuba uhambe ngokukhululeka phakathi kweBrussels Midi Zuid neBrussels Central.
I-Amsterdam Central (Amsterdam Central Station) itholakala enkabeni yedolobha lase-Amsterdam eduze komfula, lapho usuka esiteshini sesitimela, ubona u-Amsterdam Main Street ugcwele izinto ezikhangayo ezifana noMadame Tussauds hhayi lapho futhi nesifunda seRed light. Njengakwiziteshi eziningi ezinkulu zesitimela eYurophu, une amadepho wemithwalo avulwa ekuseni futhi avale sekwedlule isikhathi uma ufuna ukuvakasha nje 1 ngosuku noma ngaphambi kokungena ehhotela lakho.
E-Lille, unayo 2 iziteshi zezitimela ezingekude komunye nomunye, kodwa kumele ukhumbule i Isizinda se-Eurostar eLille, kuyinto ILle Europe futhi hhayi uLille Flandres, kepha noma ngabe wenza lokhu kube lula ukwenza iphutha, iziteshi zezitimela 5 imizuzu ahlukane.
Isiteshi Sase-Antwerp Central yilapho ugibela khona i-Eurostar e-Antwerp idolobha lesibili ngobukhulu eBelgium, Uma usuka e-Antwerp, sincoma ukuthi empeleni ufike esiteshini sesitimela eside kunalokho okunconyiwe 1 ihora ngaphambi kokusuka ngoba isiteshi sesitimela siwine imiklomelo yokuhlobisa nobuciko bokwakha 5 phansi futhi kuhle kakhulu ukuba ungene kuwo.
Lapho usuka futhi uye eRotterdam, uzobe usebenzisa Isiteshi Sesikhungo SaseRotterdam Central noma ngegama laso lesi-Dutch IRotterdam Central, lesi siteshi sesitimela sakhiwe njengendawo enkulukazi yezitolo ukusuka ngaphakathi ngaphandle, ukuze ukujabulele ukuthenga okumnandi ngaphambi nangemva kwakho Uhambo lwe-Eurostar.
Yini okufanele ngiyiphathe nami kwi-Eurostar?
Ukuziletha ohambweni lwakho lwe-Eurostar kubalulekile, kodwa ngaphezulu kwakho kufanele uqiniseke ukuthi unombhalo wakho wokuhamba we-Eurostar nawe, enye okufanele ibe nayo ipasipoti evumelekile futhi ihlala kunjalo kuhle ukuba nomshuwalense wokuvakasha.
Iyiphi inkampani ephethe i-Eurostar?
Inkampani ephethe i-Eurostar, ayiqanjwa ngokungamangazi i-Eurostar International Limited, 55% ephethwe yi-SNCF, 30% CDPQ Canada, 10% IHermes ehlanganisiwe futhi okusele kungokwaloliwe wesitimela waseBelgian, I-SNCB.
I-Eurostar FAQ yokuthi ngingaya kuphi ne-Eurostar?
Ngaphandle kweParis, London, Amsterdam kanye Brussels, Rotterdam, noLille, I-Eurostar isebenza futhi imigqa yesizini. Ngesikhathi sehlobo, phakathi kukaJulayi noSepthemba, ezinye izitimela ze-Eurostar ziya ngqo e-Avignon naseMarseilles, ngenkathi izinyanga zasebusika, phakathi kukaDisemba no-Ephreli, Izitimela ze-Eurostar zingaya ngqo ezifundeni ze-ski ezintabeni ze-Alps ezifana neMoutiers noma iBourg St Maurice okuyamadolobha asemqoka ukusuka ezindaweni zokungcebeleka zeSki njengeLa Plange, Ukukhetha lezo, I-Tignes neVal Thorens.
Yiziphi izinqubo zokubhoda ze-Eurostar?
Lapho ufika esiteshini sesitimela nendawo ebekiwe, uskena ithikithi lakho le-Eurostar, Kulezi zinsuku abantu bakhetha ukusebenzisa ikhodi ye-QR, kodwa futhi ungaba nekhophi elinzima lethikithi lakho lesitimela nawe futhi uthwebule lokho, khona-ke kufanele udlule ngesheke lokuphepha (okushesha kakhulu kunasemikhumulweni yezindiza), iya kulawulo lwamaphasiphothi bese weqa umngcele bese uhamba ngezitimela zakho nangendlela enezitolo ezimbalwa noma indawo yokuphumula yase-Eurostar, kuvidiyo elandelayo ungabona yonke inqubo kusukela lapho ufika esiteshini sesitimela uze ugibele isitimela sakho se-Eurostar.
Yiziphi izinsizakalo ku-Eurostar?
Kukhona indawo esitimeleni i-Eurostar enikezwe iziphuzo nokudla okulula ezitimeleni ze-Eurostar, Imenyu ifaka amasamentshisi, ama-chocolate we-chocolate, Ungadla, imishayo chocolate, ikhofi, ushokolethi oshisayo noma itiye. Ungadla futhi uphuze kule ndawo yokudlela ejantshi noma uthathe lokho okuthengile ukubuyisela esihlalweni sakho. Ungasebenzisa izikhala zamandla eduze kwesihlalo sakho ezitimeleni ze-Eurostar.
Ngifika kanjani eLondon St. I-Pancras International ukuthatha isitimela se-Eurostar?
Njengazo zonke izidingo zokuhamba eLondon, ukusebenzisa iLondon engaphansi komhlaba ukuze ufike eSt Pancras International Station kuyindlela elula kunazo zonke. Imigqa eyisithupha engaphansi komhlaba ifinyelela eKings Cross Station futhi usuka lapho ungahamba ngezinyawo uye eSt Pancras International ngemizuzu nje embalwa. ILondon St Pancras International nayo imizuzu embalwa ukusuka esiteshini sesitimela i-Euston uma uqhamuka eningizimu yeLondon.
Kungenzeka yini ukuthatha izitimela ze-Eurostar phakathi kweLondon ne-Amsterdam?
Kusukela ngo-Ephreli 2018, sibonga i-Eurostar, ungahamba phakathi kweLondon ne-Amsterdam cishe 3-4 amahora, futhi asikho isidingo sokushintsha izitimela eBrussels yize ezinye izitimela ze-Eurostar zisuka eLondon ziya e-Amsterdam, uyama eBrussels, kodwa lokho kuncike kumathikithi we-Eurostar owathengayo.
Ebuzwa kakhulu i-Eurostar FAQ – Ngabe kufanele ngibhukhe isihlalo kusengaphambili ku-Eurostar?
Lapho uthenga ithikithi lesitimela le-Eurostar, isihlalo sizokwabelwa ngokuzenzakalela lapho ubhuka. Futhi uma kunezitulo zamahhala uma usesitimeleni, uvunyelwe ukuhambahamba ukuze ube nesikhala esehlukile.
Ingabe ikhona i-intanethi ye-WiFi ngaphakathi kwe-Eurostar?
Ungajabulela I-intanethi ye-WiFi yamahhala kuzo zonke izitimela ze-Eurostar nawo wonke amakilasi okuhamba uma uthenga amathikithi we-Eurostar kusengaphambili.
Uma ufinyelele kulokhu, wazi konke okudingeka ukwazi mayelana nezitimela zakho ze-Eurostar futhi ulungele ukuthenga ithikithi lakho lesitimela se-Eurostar SaveATrain.com
Sinamathikithi wesitimela salawa opharetha bojantshi:
I-NS International Netherlands
I-SNCF TGV Lyria
I-NSB Vy Norway
I-Deutsche Bahn ICE Germany
I-Deutsche Bahn Germany
Ngabe ufuna ukushumeka leli khasi esizeni lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi), Noma ungaxhumeka ngqo kuleli khasi.
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml futhi ungashintsha i- / pl uye / nl noma / fr nezilimi eziningi.
Qeqesha Ukuhamba eJapan
Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Poland
I-Nepal Travel Guide